Soomaali ka dibed baxday wiil Soomaali ah oo ku dhintay gacanta Booliiska Jarmalka + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Soomaali ka dibed baxday wiil Soomaali ah oo ku dhintay gacanta Booliiska...
(Humburg) 12 Luulyo 2020 – Jaalliyadda Soomaaliyeed ee Hamburg ayaa soo qaban qaabisay Mudaaharaad ay kaga soo horjeedeen qaabkii uu u geeriyooday Rooble Warsame.
Wiilka oo 22-sano jirey Soomaalina ahaa ayaa ku dhex geeriyooday xabsi ku yaal magaalada Schweinfurt ee Bayern 26-kii bishii Febraayo 2019-kii.
Waxay dadka dibad baxayey ay ku dhawaaqayeen halku dhegyo ay ku dalbanayeen in qoyska Rooble uu helo cadaalad.
SIDEE WAX U DHECEEN? Xilli habeen ah ayay Rooble Kaamkii uu deganaa ka kaxeeyeen Booliisku, kaddib markii ay is qabteen dhallinyaro ay Kaamka wada deganaayeen. Waardiyeyaashii kaamkaasi ayaana ku guuldaraystay in ay xalliyaan buuqa dhallinyarada, waxayna deeto u weceen Booliiska.
Booliiskii ayaana kaxaystay Rooble, laba saac kaddib Booliisku waxay ku soo wargeliyeen dadkii joogay kaamka in Rooble uu geeriyooday oo uu isagu is diley waxaana arintaasi u cuntumi waydey Soomaalida deggan Jarmalka oo qaba tuhun ah in Rooble ay Booliisku dileen, waxayna dalbayaan cadaalad iyo baaritaan dhab ah in lagu sameeyo kiiska Rooble.
Dadka ku mudaaharaaday Hamburg ayaa sidoo kale cabasho xooggan ka muujiyey sharci la’aanta haysata boqollaal Soomaali ah oo ku nool Jarmalka, waxaana dibad baxayashu ay dalbadeen in ay helaan xuquuqda lamid ah tan muhaajiriinta kale ay haystaan. Waxay kale oo ka cabanayeen warqadaha Guurka Soomaalida oo aysan Dowladda Jarmalku aqoonsaneyn, Caruurta Soomaalida oo aan la siin Warqadda Dhalashada saxda ah, Midaynta qoysaska oo ay dhibaato xooggani ka haysato iyo Guryaynta.
Mudaaharaadkan oo ka dhacay iridda hore ee xarunta Baarlamaanka Maamul-goboleedka Hamburg ayaa ugu dambayntii waxaa loo gudbiyay Baarlamaanka waxyaabihii ay ka cabanayeen Soomaalida oo qoraal ah.
Gudoomiyaha Jaaliyadda Soomaalida Hamburg Axmed Nuur Ibrahim (Soomaali) oo gabagabadii ka hadlay Mudaaharaadka ayaa sheegay in ay ka sugayaan dowladda Jarmalka in xal loo helo dhibaatooyiinkan ay ka cabanayaan.
Previous articleSSC NAPOLI VS AC MILAN: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan
Next articleGOOGOOSKA: Tottenham vs Arsenal 2-1 (London waa caddahay)